मध्यरातमा पर*पुरुषसँ*ग सम्ब*न्ध, बिहान घाँ*टीमा पा*साे ! – ताजा समाचार
मध्यरातमा पर*पुरुषसँ*ग सम्ब*न्ध, बिहान घाँ*टीमा पा*साे !
वाग्लुङ । २४ वर्षीया युवतीको कोठामा राति एकजना पर*पुरुष आउँछन् । र, दुवैजना अन्त*रंग स*म्बन्ध गाँस्छन् । त्यो कुरा उनकै आमाजू र आमाजूका श्रीमान्ले देख्छन् । उनीहरूले त्यसो किन गरिस् भन्दै सम्झाउँछन् । तर २४ वर्षीया भीमकली सुनार केही पनि बोल्दिनन् । बरू भीमकली त्यो केटालाई झ्यालबाट भगाउँछिन् ।
भीमकलीलाई दुवैजना मिलेर सम्झाइबुझाइ गरे । तर उनी उल्टै कोठा ब*न्द गरेर भित्र बसिन् । आमाजूले ‘हैन बुहारी, भाइ विदेशमा तिमीहरूकै लागि भनेर दुःख गरिरहेको छ । तिमीले किन यस्तो गर्‍यौ’ भन्दै सम्झाइन् । तर उनी एक शब्द पनि बोलिनन् । भोलिपल्ट बिहान गाउँले बसेर उनलाई सम्झाइबुझाइ गराएर घर पठाए । ती पर*पुरुषको अनुपस्थितिमा नै भीमकलीलाई सम्झाए । त्यहाँबाट घर फर्किएको करिब एक घण्टामा भीमकलीले आ*त्मह*त्या गरिन् । कोठाभित्र सलको पासो लगाउँदै उनले आ*त्मह*त्या गरेकी थिइन् ।
आ*त्मह*त्या गर्नुअघि उनले एउटा कागजमा सु*साइड नोट लेखेकी थिइन् । जसमा आमाजू र आमाजूका श्रीमान्को कारण आफू आ*त्मह*त्या गर्न बाध्य भएको लेखेकी थिइन् । उनले आ*त्मह*त्या गर्दा खुट्टा भुइँमा नै टेकिएको थियो । उनले ६ फिट पनि उचाइ नभएको कोठामा सलमा पा*सो लगाएकी थिइन् । सु*साइड नो*टमा उनले कान्छी देउरानीलाई ‘मेरो छोरी र तेरो छोराको इच्छा एउटै हो । मेरो छोरीको नि इच्छा पूरा गरिदेस् । मेरो छोराले स्कूल जाँदा सधैं पैसा माग्छ । पैसा दिएस् ।’ भनेर लेखेकी थिइन् ।
त्यस्तै ‘मेरो जिन्दगी बर्बाद गर्ने, आ*त्मह*त्यागर्न बाध्य पार्ने रविलालको बूढाबूढी (उनको आमाजू र उनको श्रीमान) हुन् ।’ भनेर सुसाइड नोटमा लेखेकी थिइन् । आफूले नराम्रो काम गर्नुहुन्न घरबार बिग्रिन्छ भन्दै सम्झाइबुझाइ गर्दा उल्टै आफूहरूमाथि आ*रोप लगाएर आ*त्मह*त्या गरेको रविलाल सुनारको भनाइ छ ।
भीमकलीका श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीको लागि मलेसियामा छन् । उनी सासू ससुरासँग छुट्टिएर अलग्गै बस्दै आएकी थिइन् । उनी अलग्गिएको एक डेढ वर्ष भएको थियो । उनले ती पुरुषसँग सम्बन्धमा रहेको गाउँलेले थाहा पाएपछि आ*त्मह*त्या गरेको हुनसक्ने प्रहरीले जनाएको छ । तर माइती पक्षले भने गाउँलेको कुरा अस्वीकार गरेको छ । उनलाई आ*त्मह*त्या गर्न बाध्य पारिएको माइतीको दाबी छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।